UBryan Fuller Usethelwe Ukuqondiswa okusha kwe-'Christine 'ye-Sony, iBlumhouse
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo UBryan Fuller Usethelwe Ukuqondiswa okusha kwe-'Christine 'ye-Sony, iBlumhouse
ebhalwe ngu Waylon Jordan June 8, 2021
UBryan Fuller (Hannibal) isethwe ukuthi ibhale futhi iqondise ukuguqulwa okusha kukaStephen King's Christine OkweSony neBlumhouse Studios.
Inoveli kaKing igxile ensizweni egama lingu-Arnie okhathazeka ngokweqile ngePlymouth Fury yango-1958 ayithengayo ukuze ayilungise. Imoto inesikhathi esedlule esingesihle futhi inambitha negazi futhi kungekudala iyigoba insizwa entandweni yayo ngenkathi iqeda noma ngubani oyithukayo noma ezama ukuyihlukanisa.
Le ncwadi ngaphambilini yaguqulwa nguJohn Carpenter emuva ngonyaka we-1983. Umbono we-horror master wale noveli weza nesilinganiso sombulali kanye nengoma engenakulibaleka yedwala lakudala lama-50 / 60s.
Ngokusho komnqamulajuqu, UJason Blum uzokhiqiza ifilimu ngaphansi kwesibhengezo seBlumhouse kanye noVincenzo Natali noSteven Hoban. UPeter Kang ubuyisela isithombe seSony kwifilimu.
I-Fuller iza nocezu ngekhathalogi eqinile yomsebenzi kuhlobo olufaka izintandokazi zethelevishini nezithandwayo ezifana Hannibal futhi Ukuphusha amaDaisy kanye nomsebenzi wakhe kowokuqala – futhi abaningi bangaphikisana ngesizini enhle kakhulu ye- Gods American kususelwa kunoveli kaNeil Gaiman.
Ukuzijwayeza okusha kujoyina ulayini obanzi wokulungiswa kwefilimu yezakhiwo zeNkosi eminyakeni eyishumi edlule ngezinguqulo ezintsha ze- The Stand futhi I-firestarter kanye nokulungiswa kokuqala kwezakhiwo ezinjenge- The Outsider futhi Indaba kaLisey, womabili lawa athole ukubuyekezwa okungakholeki.
iHorror izokugcina uthumele kunguqulo entsha kaFuller ye- Christine njengoba zitholakala. Sazise ukuthi ucabangani kumazwana angezansi!
Blumhouseibryan egcweleChristineUJason Blumstephen kingWaylon Jordan
UPat Mills, u-Alyson Richards usithatha ngaphakathi 'The Retreat' Horror / Thriller